Maxay ka wada hadleen Raiisulwasaare Khayre iyo Wasiirka Dibadeedka Imaaraadka,? – Hornafrik Media Network
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa magaalada New York kula kulmay Wasiirka Arrimaha Dibadda Imaaraadka Carabta Sheikh Cabdullahi Bin Zaayid Al-Nahayaan.
Kulankan ayaa diirada lagu saaray xiriirka iyo iskaashiga labada dal, arrimaha xiisada Khaliijka iyo go’aankii dowladda Soomaaliya ka qaadatay.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa war kooban uu soo dhigay bartiisa Twitterka waxaa uu ku sheegay in xaaladda hadda taagan uu kala hadlay Wasiirka, ayna isla garteen labada dal inay kawada shaqeeyaan sidii xal looga heli lahaa.
Illo ku dhow dhow Raiisulwasaaraha ayaa HornAfrik u sheegay in Imaaraadku ay isku dayayeen inay ku qanciyaan Khayre inay Dowladda dib u eegis ku samayso Mawqifkooda Arrimaha Khaliijka, Isla markaana ay la safato Isbahaysigoodu, Waxayna Imaaraadku tusaaleeyeen Raiisulwasaaraha in Xiriir soo jireen ah uu kala dhaxeeyo Somalia, taasoo ay tahay in mudnaanta Koowaad la siiyo.
Khayre ayaa dhiniciisa ku dhaliilay Imaaraadka inay faragalin ku hayaan arrimaha Gudaha Somalia, isla markaan ay isticmaalayaan Dowlad Goboleedyadda Somalia, taasoo ka hor imaanaysa Qaanuunka Diblomaasiga ah, Wuxuuna u gudbiyay Khayre Imaaraadka Cabasho ka dhan ah Safiirkooda Somalia oo ku xadgudbay Qaanuunka Diblomaasiga ah.
Kulanka Raiisulwasaare Khayre iyo Wasiirka Dibadda Imaaraadka ayaan laga gaarin is afgarad, Waxayse ku balameen inay Kulamo kale yeeshaan.
Dhinaca kale Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa la sheegay in goor dambe oo xilliga dalka Mareykanka uu la kulmay Wasiirka Arrimaha Dibadda Qatar Sheekh Maxamed Bin Cabdiraxmaan Al-thani, iyagoo ka wada hadlay xiriirka labada dalka
Wasiirka Arrimaha Dibadda Qatar ayaa soo dhoweeyay Mowqifka Dowladda, waxana uu sheegay inay isku dayayaan arrimaha Khaliijka in wada hadal lagu dhameeyo.
Dowladda Soomaaliya ayaa wajaheysa culeysyo siyaasadeed oo uga imaanaya Isbaheysiga Sacuudiga iyo Imaaraadka, si ay uga laabato mowqifkii ay ka qaadatay xiisada Khaliijka, iyadoo qaar ka mid ah maamul goboleedyada ay bilaabeen inay ka soo horjeestaan go’aanka Xukuumadda.